Bonke abantu badinga ukuqonda inhloso yomsebenzi Wami emhlabeni, okungukuthi, injongo yokugcina yomsebenzi Wami kanye nezinga ekumele ngifinyelele kulo kulo msebenzi ngaphambi kokuba ungaqedwa. Uma, emva kokuhamba nami kuze kube kulolu suku, abantu bengaqondi ukuthi umsebenzi Wami umayelana nani, lokho akusho ukuthi bekuyize ukuhamba Nami? Abantu abahamba Nami kumele bayazi intando Yami. Sengisebenze emhlabeni izinkulungwane zeminyaka, futhi kuze kube namuhla ngisenza umsebenzi wami ngale ndlela. Yize kukhona izinto ezininginingi ezitholakala emsebenzini Wami, inhloso yawo ilokhu ingaguqukile. Njengoba nje, ukwenza isibonelo, noma ngigcwele ukwehlulela nokusola okubhekiswe kumuntu, engikwenzayo kusengenxa yesizathu sokumsindisa, nangenhloso yokusabalalisa kangcono ivangeli Lami, nokwandisa umsebenzi Wami phakathi kwabo bonke abeZizwe ngemuva kokuthi umuntu enziwe waphelela. Ngakho-ke namuhla, esikhathini lapho abantu abaningi bedumele kakhulu emathembeni abo, ngisaqhubeka nomsebenzi Wami, ngiqhuba umsebenzi ekumele ngiwenze ukwehlulela nokusola umuntu. Phezu kokuthi umuntu ukhathele yinto engiyishoyo nangaphandle kokuthi akanasifiso sokukhathalela umsebenzi Wami, ngisaqhubeka nokwenza umsebenzi Wami ngoba inhloso yomsebenzi Wami ayikaguquki futhi nohlelo Lwami lwasekuqaleni alusoze lwabhidlika. Umsebenzi wokwahlulela Kwami ukwenza umuntu angilalele kangcono, nomsebenzi wokusola Kwami ukuvumela umuntu ukuba aguquke ngokunomthelela ongcono. Nakuba engikwenzayo kungenxa yokuphatha Kwami, angikaze ngenze noma yini engeyona inzuzo kumuntu. Lokhu kungoba ngifuna ukwenza zonke izizwe ngaphandle kuka-Israyeli zilalele njengama-Israyeli futhi ngizenze abantu bangempela, ukuze ngibe nendawo emazweni angaphandle kuka-Israyeli. Lokhu ukuphatha Kwami; kungumsebenzi engiwufezayo emazweni abeZizwe. Namanje, abantu abaningi abakakuqondi ukuphatha kwami ngoba abanandaba nalezi zinto, esikhundleni salokho bacabangana ngekusasa labo kanye nalapho beya khona. Noma ngingathini, abantu abanandaba nomsebenzi engiwenzayo, banaka kuphela isiphetho zabo esikhathini esizayo. Uma izinto ziqhubeka ngale ndlela, umsebenzi Wami ungakhula kanjani? Ivangeli Lami lingasabalaliswa kanjani emhlabeni wonke? Kumele nazi ukuthi lapho umsebenzi Wami wanda, ngizonihlakaza, futhi Ngizonishaya njengoba nje uJehova ashaya izizwe zakwa-Israyeli. Konke lokhu kuzokwenziwa ukuze ivangeli Lami lisabalale emhlabeni wonke, nokusabalalisa umsebenzi Wami kubantu beZizwe, ukuze igama Lami lidunyiswe ngabadala nezingane ngokufanayo, negama Lami elingcwele liphakanyiswe emilonyeni yabantu bakuzo zonke izinhlanga nezizwe. Kulesi sikhathi sokugcina, ngizokwenza igama Lami liphakanyiswe phakathi kwabantu beZizwe, ngenze izenzo Zami zibonwe abeZizwe ukuze bangibize ngoSomandla ngenxa yezenzo zami, bese ngenza amazwi Ami enzeke ngokushesha. Ngizokwenza bonke abantu bazi ukuthi angisiyena uNkulunkulu wama-Israyeli kuphela, kodwa futhi uNkulunkulu wabo bonke abantu beZizwe, ngisho nezizwe engiziqalekisile. Ngizokwenza bonke abantu babone ukuthi nginguNkulunkulu wayo yonke indalo. Lona ngumsebenzi Wami omkhulu kakhulu, inhloso yohlelo lomsebenzi Wami ezinsukwini zokugcina, futhi yiwona kuphela umsebenzi okumele ufezwe ngezinsuku zokugcina.
Manje sekuyisikhathi lapho umoya Wami wenza izinto ezinkulu, futhi yisikhathi lapho ngisebenza phakathi kwabeZizwe. Ikakhulu, sekuyisikhathi lapho ngihlela yonke indalo ngibeka omunye ngamunye esigabeni esifanele ukuze umsebenzi Wami uqhubeke ngokushesha nangempumelelo enkulu. Ngakho-ke, engikucela kuwe kusengukuba uzinikele ubuwena bonke kuwo wonke umsebenzi Wami; ukwedlula lokho, kumele ukwazi ukuhlukanisa futhi uqiniseke ngemisebenzi yonke engiyenze kuwe, uphinde ufake wonke amandla wakho emsebenzini Wami ukuze ube nempumelelo enkulu. Yiko lokhu okumele ukuqonde. Gwemani ukuxabana nodwa, bhekani izindlela zezisombululo, okanye ukubheka ukubheka indlela yokuphindela emuva noma ukufuna ukuthokomala kwenyama, okuyinto ezobambezela umsebenzi Wami futhi yone ikusasa lakho eliqhakazile. Ukuwenza kanjalo ngale kokukukunikeza ukuvikeleka kuzokulethela imbubhiso. Ngeke lokhu kube ubuphukuphuku bakho? Lokhu okuthokozela ngomhobholo namuhla yikho kanye lokhu okona ikusasa lakho, kanti ubuhlungu ophila ngaphansi kwabo namhlanje ibona kanye lobu obukuvikelayo. Kufanele uzibone ngokucacile lezi zinto, ukuze ugweme izilingo ozocindizeleka ukuba uphunyuke kuzo uphinde ugweme ukwedukela enkungwini esindayo esitha ilanga. Uma le nkungu esindayo icwengeka, uyozithola usekwahlulelweni kosuku olukhulu. Ngaleso sikhathi, usuku Lwami luyobe selufikile kumuntu. Uyokubalekela kanjani ukwahlulela Kwami? Uyokwazi kanjani ukumelana nokushisa okungqongqisayo kwelanga? Uma nginikezela umuntu inala Yami akayilondolozi esifubeni sakhe, kodwa kunalokho uyilahla kude ezindaweni okungekho muntu oyoyibona khona. Lapho usuku Lwami lwehlela kumuntu, ngeke esakwazi ukuthola inala Yami noma athole amazwi ababayo eqiniso engalikhuluma kuye kudala. Uyokhala alile, ngoba ulahlekelwe ukugqama kokukhanya wayesewela ebumnyameni. Lokhu enikubona namuhla kuyinkemba nje ebukhali yomlomo Wami. Anikayiboni induku esesandleni Sami noma ilangabi engishisa ngalo umuntu, futhi yingakho nisaqhosha niphinde ningazithibi ebusweni Bami. Yingakho nisalwa Nami endlini Yami, niphikisa ngolimi lomuntu lokhu engikukhulume ngomlomo Wami. Umuntu akangesabi, futhi nakuba eqhubeka nokuba nobutha nami kuze kube namhlanje, ulokhu engenakho nhlobo ukwesaba. Ninolimi namazinyo alabo abangalungile emilonyeni yenu. Amazwi nezenzo zenu afana nawenyoka eyayengela u-Eva ekoneni. Nifuna komunye nomunye iso ngeso nezinyo ngezinyo futhi nilwa ebukhoneni Bami ukuzihlwithela izikhundla, udumo nenzuzo, kodwa anazi ukuthi ngiyawabuka ngasese amazwi nezenzo zenu. Ngaphambi kokuba nifike ebusweni Bami, senginazi ekujuleni kwezinhliziyo zenu. Umuntu uhlale efisa ukuphunyuka ekubambeni kwesandla Sami, agweme ukubuka kwamehlo Ami, kodwa angikaze ngiwagweme amazwi noma izenzo zakhe. Kunalokho, ngiyavuma ngenhloso ukuba zifinyelele emehlweni Ami ukuze ngisole ukungalungi ngiphinde ngahlulele ukuhlubuka kwakhe. Kanjalo, amazwi nezenzo zomuntu ezifihliwe zihlala zibekwe phambi kwesihlalo sokwahlulela, futhi isihlalo sokwahlulela asikaze sisuke kumuntu, ngoba ukuhlubuka kwakhe kukhulu kakhulu. Umsebenzi Wami ukushisa ngiphinde ngihlambulule wonke amazwi nezenzo zomuntu ezashiwo futhi zenziwa ebukhoneni boMoya Wami. Ngale ndlela, uma sengishiya umhlaba, abantu basayokwazi ukuqhubeka nokwethembeka Kimi, futhi basayongikhonza njengoba izinceku Zami ezingcwele zenza umsebenzi Wami, zivumela umsebenzi Wami emhlabeni ukuba uqhubeke kuze kufike usuku lapho usuqediwe khona.
Izexwayiso Ezintathu Umuntu Oye Wachaza UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu? UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?